Saddex nooc oo dhaadheer oo lagu raadinayo | Abuurista khadka tooska ah
Markaa waan kula soo socodsiin doonaa adiga saddex nooc oo raadinta ah u duulo sidoo kale loo yaqaan noocyada calaamadaha garoonka. Waana taas raadinta, oo sidoo kale loo yaqaan 'signaling system', ujeeddadiisa ugu weyni waa in laga caawiyo horumarinta nidaamyo hagitaan wanaagsan oo leh gaar ahaanta u oggolaanshaha dadka inay ku yimaadaan qaab fudud oo dhakhso ku socda meel loo socdo inkasta oo ay umuuqato mid aan indhaha aadanaha arki karin, waa wax si joogto ah loo isticmaalo.
Caadiyan Waxaa laga helaa aagag waaweyn, sida, tusaale ahaan xarumaha wax laga iibsado, matxafyada, shirkadaha waaweyn iyo xitaa garoomada diyaaradaha. Tan dambe, isticmaalkeeda waxay noqotay lama huraan qulqulka badan ee socdaalka dartiis, marka lagu daro booska weyn ee ay ka kooban tahay iyo tirada badan ee adeegyada ay bixiyaan.
1 Waa maxay raadinta waddooyinka?
Waa maxay raadinta waddooyinka?
Raadinta jidku waa mid aad u badan waxtar leh, inta badan ku garoomada diyaaradaha caalamiga, oo alifbeetku gabi ahaanba ka duwan yahay waxa dad badani yaqaanaan, markaa waa lagama maarmaan inuu awoodo inuu ku hago calaamadaha oo aan ahayn hadal.
Haddii aad fiiro gaar ah u yeelato, waxaad ogaan doontaa in dhammaan garoomada diyaaradaha ay isticmaalaan isku nooc font far; marka lagu daro adeegsiga isla faahfaahinta ku jirta Calaamadaha. Caadi ahaan noocyada badanaa la isticmaalo waa: Frutiger, Helvetica iyo Clearview.
Waa la adkeyn karaa inay runti macno yar samaynayso isticmaal nooc sanduuq ah 'ser serif' mana aha mid ka mid ah kuwa aan kor ku soo sheegnay, maxaa yeelay kuwani badanaa way ka sahlan yihiin Lear hubsasho masaafada.
Qoraa-yaqaan Swiss ah Adrian Frutiger ayaa la abuuray 1975, qaab-qoraalkan inta badan waxaa lagu isticmaalaa garoonka diyaaradaha Charles de Gaulle oo reer Paris ah.
Tan ka hor wuxuu si guul leh u abuuray Abuurka Caalamka, kaas oo ah far ka timaadda nooca Sans Serif, laakiin wuxuu jeclaa in lagu qaado fikir "sanduuqa”, Taasi waa, wuxuu rabay inuu ka baxo aaggiisa raaxada iyo naqshad font caadadiisu buuxda tahay oo ka turjumeysa ruuxda astaamaha dhismaha casriga ah in garoonkani lahaa.
Frutiger waa nooc xarfaha lagu yaqaan oo lagu yaqaan caan ah kor u kaca iyo soo degidda, sida aan ku arki karno xarafka "p" iyo "l", marka lagu daro furitaanka waxyar oo xiran gudaha, sida si cad loogu muujiyay xarfaha "n" iyo "e".
Si loo qeexo warqadda noocan ah, waxaan dhihi karnaa taas waa raadinta ugu da'da weyn adduunka oo dhan, maxaa yeelay Helvetica waxay ku dhowdahay inay yeelato dhexdhexaad qarnigii nolosha, laga soo bilaabo xilligii lagu abuuray Switzerland markii ugu horreysay.
Astaamaha Helvetica waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa soo jireen ah, dhexdhexaad ah iyo yaqaan. In kasta oo uu safar dheer ku dhexjiray adduunka raadinta, qaabka qoraalka wuxuu ku guuleystey inuu istaago sannadaha lana ilaaliyo dhalinyaro iyo hada.
El Goolka Helvetica waa in la fududeeyo Lear Qoraallada iyada oo aan la isku khaldin xarfaha qaarkood, sida had iyo jeer dhacda tusaale ahaan "o" iyo "a", tani waxay u oggolaatay qaab-qorista Helvetica inay noolaato si guul leh inta lagu jiro sannadahan oo dhan, xitaa ka dib markii loo maray habab kala duwan oo naqshadeyn ah.
Waxay ka kooban tahay far qoraal ah oo ah waxaa loo abuuray in lagu isticmaalo Mareykanka iyo nidaamka wadada weyn ee gobolada inta lagu gudajiray qarnigii XNUMXaad.
Kadib shaqooyin cakiran oo adag, waxaa ugu dambeyntii la soo gabagabeeyay in Clearview uu ahaa nooca loo isticmaalo. sifiican ayaad wax u aqrin laheyd masaafo dheer. Dhowr isbeddel ayaa loo sameeyay si looga dhigo wax akhris badan, oo ay ka mid yihiin ballaarinta meelaha ee jira inta udhaxeysa hal xaraf iyo tan ku xigta, marka lagu daro dherer weyn oo ka mid ah xarfaha waaweyn marka la barbar dhigo ka yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Saddex xarfo oo dhaadheer oo raadinta ah
Diego wheel dijo
Frutiger, Helvetica iyo Clearview.
Raadinta waddooyinka marka lagu daro astaamaha garoomada diyaaradaha, ayaa sidoo kale lagu arkay isbitaallada. Goob shaqsiyeed waxaa sidoo kale jira noocyo warqado ah. Isku dhafka midabada ee sida aadka ah ii soo jiita waa cawlan oo casaan ah (cirro xagga dambe ah).